15T / D ဆန်စက်စက်ရုံ၏ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
VTLN15 အမျိုးအစားဆန်စက်စက်ရုံသည်ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်,သောစပါး destomer ၏ရေးစပ်သည်, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားပေးသည်, ကျောက်ကိုဖယ်ရှား, ဆန်ကြိတ်ခွဲခြင်း. ကောင်းမွန်သောကျောက်တုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည့်စပါးဆန်စက်စက်ရုံ, အမြန်ခွံကိုချိုးနိုင်သည့်အမြန်နှုန်းနှင့်ကောင်းသောကောက်ပဲသီးနှံခွဲခြင်း effect.This ဆန်စက်အားသေးငယ်သောစက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်မြန်ဆန်သောထွက်ရှိမှု။ စပါးဆန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောစပါးဖြစ်သည်, အစာရှောင်ခြင်းဆွဲငင်အားမျက်နှာပြင်ဆန်ခါမြန်နှုန်းနှင့်ဆွဲငင်အားဆန်ခါမျက်နှာပြင် surface.Residues နှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ.
ဆန်စက်ကြိတ်ခွဲစက်အပြည့်ဖြည့်ထားသောစက်ရုံသည်ပိုလန်စက်နှင့်တပ်ဆင်ထားသည်,ဆန်စက်စက်,ဆန်စစ်စက် စသည်တို့,နှင့်ကြီးမားသော output ကိုရှိပါတယ်, သေးငယ်တဲ့ခြေရာ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်းစပါးဆန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားဆန်စက်လုပ်ငန်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်,ပြည့်စုံသောဆန်စက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်ခေတ်မီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်, အကြီးစားဆန်စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်.
2 ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး, မြေတပြင်လုံးစစ်ဆင်ရေးတစ် ဦး တည်းသာလူတစ် ဦး အားဖြင့် operated နိုင်ပါသည်.
3.စပါးကြိတ်ခွဲစက်ပြုပြင်ရေးစက်ရုံသည်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ထိရောက်သောဂီယာနည်းပညာဖြင့်စတင်သည်,အနိမ့်ဆုံးရှုပ်ထွေးသောနှင့်အတူ unbeatable ကြိတ်စွမ်းဆောင်ရည်ပေး.
4.တစ် ဦး polishing စက်ကိုက်ညီ, သုံးစွဲသူများသည်ဆန်ဖြူအတွက်ဆန်ဖြူကိုချောမွေ့စွာအရောင်တင်နိုင်သည်, ဆန်ပြီးသွားသည့်ဆန်နှုန်းနိမ့်ကျမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်မတူညီသောဆန်စပါး polishing လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း.
6.ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးပြည့်စုံသောဆန်စက်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပတွင်ဆန်ပြုပြင်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်, အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဖောက်သည်များထံမှဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသည်, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှု.
အလိုအလျောက်အစာကျွေးသောကိရိယာတပ်ဆင်ထားသောဆန်စက်စက်ရုံအပြည့်အစုံ, သန့်ရှင်းရေးဆန်ခါ, ကျောက်ကို separator စက်, သံ roller စပါး husker, ခွဲနေခြင်းကိုသတိရပါ, စပါးနှင့်အညိုရောင်ဆန်ခွဲခြားမှုအတွက်ဆွဲငင်အား, သံ roller ကြိတ်စက်, သံ roller illustrating စက်, ကျိုးဆန်အဆင့်အတန်းစက်, လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုကက်ဘိနက်, ဤစပါးဆန်စက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အထူးကြိတ်ခွဲစက်များတပ်ဆင်နိုင်သည်.
အာဏာနှင့်: 28.97 kw
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း: 700-800ကီလိုဂရမ် / h
ယေဘုယျရှုထောင့် (အရှည် * width * အမြင့်): 5000*2000*2900မီလီမီတာ
သက်ဆိုင်သောအရာများ: ရှည်လျားသောပုံစံဆန် ,ပတ်ပတ်လည်ပုံစံဆန်,Millet
15T / D ဆန်စက်စက်ရုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ